बच्चाहरु संग बनाउने व्यंजनहरु - रमाईलो, सरल, र रचनात्मक! | बेजिया
बच्चाहरूसँग गर्न रेसिपीहरू
सुसाना Godoy | 08/04/2021 14:00 | व्यंजनहरु
के तपाई पारिवारिक क्षणको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ? त्यसैले आफुबाट टाढा राख्नु जस्तो केहि छैन बच्चाहरूसँग गर्न रेसिपीहरू। किनभने घरको सब भन्दा सानोमा एउटा रमाईलो क्षण हुनेछ र तिनीहरू केवल एक मात्र हुने छैनन्। यो सत्य हो कि उनीहरूसँग धेरै कुरा छन् जहाँ उनीहरू आफैं मनोरन्जन गर्न सक्छन्, तर भान्सा पनि तिनीहरू मध्ये एक स्थान हो जहाँ तिनीहरू एकीकृत गर्न सक्छन् र अधिक र अधिक।
किनभने त्यहाँ थुप्रै व्यंजनहरू छन् जुन हामी बच्चासँग नायकको रूपमा बनाउन सक्छौं। साधारण चरणहरू जस्तै घुँडा टेक्न, जुन तपाईं प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। साथै, तिनीहरूले आफ्नै सिर्जनाहरू पछि खानेछन्, र त्यो सँधै राम्रो सन्तोषजनक चीज हुन्छ। यदि तपाईं रमाईलो र साधारण विचारहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने, त्यसो भए पछि केहि पनि याद गर्न सक्नुहुन्न, किनकि तपाईं सानाहरूलाई अझ बढी प्रेम गर्नुहुनेछ। के हामी सुरु गर्छौं?
1 आगो बिना बच्चाहरूको लागि सजिलो व्यंजनहरू
1.1 काटिएको रोटीले बनाएको केक
1.2 केहि स्वादिष्ट fajitas
1.3 फल skewers
1.4 एक्सप्रेस चकलेट केक
2 बच्चाहरूको लागि रमाईलो व्यंजनहरू
2.4 केरा Bonbons
3 बच्चाहरूका लागि खाजा व्यंजनहरू
3.1 च्याउको आकार अण्डा
3.2 रमाईलो आकारको साथ पफ पेस्ट्री एपेटाइजर
3.3 तपाईंको प्लेटमा रेनडिअर रुडोल्फ
3.4 Centipede सलाद
3.5 आकारको मसूरको भालु
आगो बिना बच्चाहरूको लागि सजिलो व्यंजनहरू
बच्चाहरूका लागि सजिलो रेसिपीहरू र मध्यम गर्मी बिनाका हामी एक राम्रो विचारहरू पाउन सक्छौं जुन हामी फेला पार्न सक्छौं। किनकि हामीलाई थाहा छ कि उनीहरूको लागि यो खेल हो, रमाइलो भान्सामा। तसर्थ, हामी तिनीहरूलाई जहिले पनि खतराहरूबाट जोगाउनु पर्छ जस्तै आगो। त्यसो भए हामी साना र सानाको साथ सरल र रमाईलो व्यंजनहरूको एक श्रृंखला पकाउन जाँदैछौं। थप रूपमा, तिनीहरूलाई खाना पकाउन आवश्यक पर्दैन, त्यसैले तिनीहरू अझै व्यावहारिक हुन्छन्। ती सबैको राम्रो नोट राख्नुहोस्!
काटिएको रोटीले बनाएको केक
यो एक चिसो डिश हो जुन हामी सबैलाई थाहा छ। थप रूपमा, यो धेरै तहहरूको मिलेर बनेको छ, यो बनाउनको लागि सजिलो छ। यो बच्चाको खेल हो र यस्तै, तिनीहरू यसै जस्तो धेरै केक बनाउनको लागि हुनेछन्। यो गर्नका लागि तपाईलाई आफूले चाहेको आकारको मोल्ड आवश्यक पर्दछ, यो सँधै तपाईंको रुचि र अतिथिहरूमाथि निर्भर गर्दछ। त्यसो भए, हामी काट्छौं रोटीको टुक्राको साथ तल कभर गर्नेछौं। तपाईं पनीर र ट्यूनाको मिश्रणले लेयरहरू फैलाउन सक्नुहुन्छ, काटिएको उमालेको अण्डा वा काकडी र सलाद जोड्नुहोस्, तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मन पराउनुहुने कुरा!। हामीले रोटीको अर्को लेयर राख्यौं, हामी यसलाई फेरि भर्दछौं र हामी रोटीको नयाँ लेयरसहित समाप्त गर्दछौं। तपाईं मेयोनेज, जैतूनका टुक्राहरू र स्वादको लागि सजावटको साथ सजावट गर्न सक्नुहुन्छ।
केहि स्वादिष्ट fajitas
यस अवस्थामा हो, तपाईं आफैं भान्सामा केही सामग्रीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, ताकि पछि तिनीहरूले केवल फाजिटा भर्नु पर्छ। केवल केही मकै टारटिलाहरू किन्नुभयो र केही भर्ने सामग्रीहरूको बारेमा सोच्दै, minutes मिनेट भन्दा कममा हामीसँग एउटा चिसो र स्वादिष्ट पकवान हुनेछ जुन साना व्यक्तिहरूले सँगै राख्नेछन् र उनीहरू हाँस्नेछन्।
त्यसोभए तिनीहरू डेजर्टको लागि वा खाजाको रूपमा फलहरू खान सक्दछन्, उनीहरूलाई ससकुल्ल स्कीउर आफै तयार गर्न दिँदैन। तपाईं केहि काठ काठको स्टिकहरू किन्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको निरीक्षणमा, सानालाई उनीहरूको मनपर्ने फलहरू प्रस्तुत गर्न दिनुहोस्। अवश्य पनि, उत्तम कुरा यो हो कि तपाईंले फलफूललाई ​​टुक्रा-टुक्रा पार्नु भएको छ, विशेष गरी यदि हामी बच्चाहरू आफैंले काटनको लागि सानो छ भन्ने तथ्यको बारेमा कुरा गर्छौं भने। एक विचार जुन एकै समयमा स्वादिष्ट र रंगीन हुन सक्छ!
एक्सप्रेस चकलेट केक
पक्कै तपाईंलाई थाहा छ कि गोल वेफरहरू जुन उनीहरू कुनै पनि सुपरमार्केटमा बेच्छन्। खैर, तिनीहरू केकको ठूलो अड्डाहरू हुनेछन्। थप रूपमा तपाईलाई तपाईको रोजाइको चकलेट क्रीम चाहिन्छ र यो त्यस्तै हो। अब, रोटी केक जस्तै, हामी तहहरू बनाउनु पर्छ। एक वेफर जुन हामी चकलेट क्रीमले भर्नेछौं र हामी लेयरहरू बनाउँछौं। अन्त्यमा, हामी दुबै शीर्षमा र केकको बाहिर सबैतिर चकलेटहरू फैलाउने छौं। यसलाई चकलेट वा रंगीन मिठाईहरूसँग सजाउनुहोस् र अब तपाईंसँग केही मिनेट र ओभन बिना नै स्वादिष्ट चकलेट केक हुनेछ.
बच्चाहरूको लागि रमाईलो व्यंजनहरू
बच्चाहरूसँग पाक कला हामी एक सबैभन्दा रमाइलो र रमाईलो क्षणहरू खर्च गर्नेछौं। हो, पछि आटा र सबै दृश्य भागहरूबाट अरू सामग्रीहरू संकलन गर्नका लागि तयार हुनुहोस् र सायद केहि यस्तो देखिने छैन। तर बाँचेको क्षण हामीबाट कोही लिने छैन। तिनीहरू सजावट गर्न, घुमाउन र विस्तारको सबै चरणहरूमा उपस्थित हुन चाहन्छन्। तसर्थ, यस खण्डमा हामीले ती रेसिपीहरू बच्चाहरूलाई बनाउन मनपराउँदछौं जुन उनीहरूले मनपराउँदछन्, किनकि तिनीहरूसँग सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ र अधिक छ।
कसलाई पिज्जा र अधिक बनाउन मन पराउँदैन, यसलाई निल्छ? बच्चाहरू पनि। त्यसकारण, हामी घरमा एक क्षण पिज्जाको लागि शर्त लगाउँछौं। यदि तपाईं बनाइने आधारहरू खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाईं केवल तिनीहरूसँग सब भन्दा कभर गर्नुपर्दछ, तपाईंलाई थोरै टमाटर, चीज, जैतुन, केही तरकारीहरू वा कुखुरा चिसो कटौतीको रूपमा।, अरु मध्ये। यदि तपाईं आटा बनाउनुहुन्छ भने, धेरै राम्रो, किनभने तपाईं तिनीहरूलाई पानी वा पीठो जोडेर यसलाई घुमाउन दिनुहुनेछ। तपाईं देख्नुहुनेछ कति राम्रो यो तिनीहरूलाई सूट!
यो एक प्रकारको लोलीपप हो तर आफ्नै हातले बनाइएको हो। यो गर्नका लागि तपाईले ठूलो कचौरामा केही मफिनहरू कुचल्नु पर्छ। त्यसो भए तपाई क्रीम चीज चीज थप्नुहुनेछ र कम्प्याक्ट नहुन्जेल तपाईले घुमाउनु पर्छ। यस पीठोबाट, हामी साना भागहरू लिनेछौं, जुन हामी बलहरू बनाउनेछौं वा तपाईं आफ्नो स्वाद अनुसार त्यसलाई सपाट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, तपाइँ सेतो चकलेट पिघलनु पर्छ र विभिन्न र createहरू सिर्जना गर्न फूड कलरिंग थप्नु पर्छ। हाम्रो पप-केकहरू गठन गर्न हामीलाई केही लाठीहरू चाहिन्छ, जुन मिकाडो वा स्किवर स्टिकहरू जस्ता मीठो हुन सक्दछ। हामी ती मासुहरूलाई पग्लिएका चकलेटले भिज्यौं र आटाका बलहरूमा क्लिक गर्नुहोस् जुन हामीले बनायौं। अब यो पूरै बल भिजेको र शेभिंग्स वा चकलेट नूडल्सको साथ पूर्ण रंगमा सजावट गर्न बाँकी छ। उनीहरूलाई सुख्खा हुनको लागि कुर्नुहोस् र तपाईं सम्पूर्ण परिवारसँग रमाउन सक्नुहुन्छ।
बेकिंग कुकीज हाम्रै अर्को सानो बच्चाको लागि हो। किनभने तिनीहरूलाई आकार दिनु भनेको विचार हो र बच्चाहरूको लागि सजिलो मिठाई। पहिले हामी लगभग १ 150० ग्राम बटर पिघल्यौं र यसलाई १०० ग्राम चिनीसँग मिसाउँदछौं। दुई मध्यम अण्डा र एक सानो भेनिला सार थप्नुहोस्। हामी सबै चीजहरू फेरि राम्ररी मिलाउँछौं र २100० ग्राम आटा चाल्दछौं। अब यो केवल तपाईंको हातहरू मैलो बनाउनको लागि बाँकी रहन्छ। त्यसोभए तिनीहरूले बलहरू बनाउँदछन् र उनीहरूलाई आकार दिन्छन् वा तपाईंको प्राथमिकतामा निर्भर गर्दै कटर प्रयोग गर्न सक्दछन्। सजावट र बेक गर्नुहोस्।
बीचमा चकलेट देखापर्ने बखत, यो सँधै रमाईलोको साथ बनाउने बच्चाहरूका लागि बनाइने अर्को व्यञ्जन हो। यस अवस्थामा यो छ केराको एक जोडी काट्नुहोस् धेरै पातलो छैन। अर्को तर्फ, हामी एउटा कचौरामा चकलेट पिघलनु पर्छ ठूलो अब तपाईंले प्रत्येक स्लाइस पिघलिएको चकलेटमा राख्नुपर्दछ ताकि यसले यसलाई राम्रोसँग छोप्दछ। तिनीहरू छुट्टै ट्रेमा फालिनेछ। हामी उनीहरूलाई हामी जस्तै मनपराउन र फ्रीजरमा सजाउन सक्छौं। परिणाम शानदार छ!
बच्चाहरूका लागि खाजा व्यंजनहरू
अब हामी घरका सानाका लागि एक उत्तम संयोजन बनाउने छौं। किनकि हामीले पहिले नै देख्यौं कि साना बच्चाहरूसँग पकाउन कत्ति सजिलो हुन्छ र बच्चाहरूको लागि खाना पकाउने व्यञ्जनहरू सिर्जना गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, तिनीहरूले पक्कै पनि हामीलाई मद्दत गर्न सक्छन्, तर हामी केहि बढि ध्यान केन्द्रित गर्ने छौं खाना चाहने बच्चाहरूको लागि विधि विचारहरू सबैको। उनीहरु बच्चाहरूलाई स्वस्थ खानको लागि विचारहरू। यसैले हामी एक रचनात्मक परिणामको मज्जा लिनेछौं जसले तपाईंको सबै इन्द्रियहरू खोल्दछ र तपाईंको सहयोगमा। हामी अरू के सोध्न सक्छौं?
च्याउको आकार अण्डा
एक उत्तम, सरल र द्रुत नुस्खा। यो गर्नका लागि तपाईले अण्डाहरू पकाउनु पर्छ र जब उनीहरू लगभग चिसो हुन्छन्, छीलो र हामीलाई ट्रेमा राख्नुहोस्। अब आधा मा एक चेरी टमाटर काट्नुहोस् र यसलाई टोपीको रूपमा राख्नुहोस्। तपाईं टमाटरमा अण्डाको टुक्रा छिर्न सक्नुहुन्छ र त्यो हो। तपाईं थोरै सलादको साथ यस थालमा सँगसँगै जान्न सक्नुहुन्छ र राम्रो परिणामको लागि अण्डाहरू ठुलो छैन भने राम्रो हुन्छ।
रमाईलो आकारको साथ पफ पेस्ट्री एपेटाइजर
तपाईं केहि जनावर र आर को लागी सोच्न सक्नुहुन्छउनीहरूको अनुहारको साथ एक पफ पेस्ट्री ecortar। सब भन्दा सजिलो कुरा अनुहारको लागि गोल बेसमा कानमा लगाउन दुई सानो छ। अवश्य पनि, यदि तपाईं पिगी बनाउँन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अगाडि गोल गोल राख्नुहुनेछ। तपाईं पफ पेस्ट्रीको टुक्राहरू अटाउन सक्नुहुन्छ हल्का आटा सेलाएर। तपाइँले यसलाई चाहानु भएको आकार दिनुहोस्, तपाइँ भर्न वा सजावट थप्न सक्नुहुन्छ र चुलोमा। तिनीहरूले यो प्रेम गर्नेछन्!
तपाईंको प्लेटमा रेनडिअर रुडोल्फ
यदि तपाईं तिनीहरूलाई केही सेतो चामल, प्राकृतिक टमाटर र केही ससेजको साथ खान चाहनुहुन्छ भने, अब तपाइँ रचनात्मक तरिकामा प्लेट गठन गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न तपाई प्लेटको बिचमा एकदम गोल भात राख्नुहुनेछ। नाकका लागि, हामी आधा चेरी टमाटर प्रयोग गर्नेछौं। दुई जैतुनका टुक्राहरू आँखा हुनेछन् र रेनडिअर एन्टिलर सॉसेजको लागि आधामा अलिकता खुला हुनेछ।
ताकि तिनीहरूले केही तरकारीहरू खाए, जस्तो कि केही छैन रचनात्मक भाँडा बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। तिनीहरू आफैंलाई मद्दत गर्न सक्षम हुनेछन्। यस अवस्थामा यो काकडीका स्लाइसहरूसहित सेन्टिपीको शरीर बनाउने बारेमा बेटिंगको बारेमा हो। उसको टाउको फेरि आधा चेरी टमाटर र खुट्टा, गाजर टुक्राहरू हुनेछ। तपाईं प्लेटको शीर्षमा एक सानो मकैको साथ सूर्य बनाउन सक्नुहुन्छ।
आकारको मसूरको भालु
हामी पहिले नै त्यो देखिरहेका छौं बच्चाहरूसँग बनाउने विधिहरू धेरै रचनात्मक हुन सक्छन्। तसर्थ, यदि तपाईले देख्नुभयो कि तपाईका साना केशर दालका प्रशंसक छैनन् भने, तपाईले केहि आविष्कार गर्नु पर्छ। तपाईंले त्यसलाई थालमा राख्नुहुनेछ, दायाँ बीचमा, अनुहार पकाएको भात। हाम्रो भालुका कानहरूका लागि, आधा उमालेको अण्डा, जबकि आँखाका लागि, उमालेको अण्डाको गोलाकार टुक्रा र केन्द्रमा जैतुन। यस तरिकाले हामी तिनीहरूको प्लेटमा जीवन दिनेछौं र तिनीहरूले हामीलाई धन्यवाद दिनेछन्। तपाईंसँग पहिले नै दाल भालु छ!
यी बच्चाहरूमध्ये कुन कुन तपाईं आफ्ना बच्चाहरूसँग अभ्यासमा राख्नुहुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » बच्चाहरूसँग गर्न रेसिपीहरू
नरिवल तेल प्रयोग गर्ने उत्तम तरिकाहरू
गत वर्ष प्रकाशित गरेको नारीवादको बारेमा books पुस्तकहरू